7075-T6 လူမီနီယမ်အလွိုင်း - တရုတ်ဟန်ကျိုး Jinding လူမီနီယမ်
custom ဖြေရှင်းချက် Guoxin 7000 စီးရီးမှ 1000 စီးရီး၏တန်းအတွက်လူမီနီယံအလွိုင်းပိုက်, ချောင်းတွေနဲ့ profile များကိုထုတ်လုပ်, ကျွန်တော်တို့လူမီနီယံအလွိုင်းတန်း, သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဤ 7000 စီးရီးလူမီနီယံအလွိုင်း၏အပူကုသမှုကဲ့သို့သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ပြောပြ ကျေးဇူးပြု. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီထုံးစံလူမီနီယံအလွိုင်းဖြစ်စဉ်ကိုပေးနိုင်ပါသည် ဖောက်သည်တောင်းဆိုချက်များနှင့်အညီဖြေရှင်းချက်။ ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများတွင်အသုံးပြုသောလူမီနီယံနှင့်လူမီနီယံအလွိုင်းတန်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, ကိုးကားကျေးဇူးပြုပြီး click here: လူမီနီယမ်အဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမီနီယမ် Extru ...
Guoxin 7000 စီးရီးမှ 1000 စီးရီး၏တန်းအတွက်လူမီနီယံအလွိုင်းပိုက်, ချောင်းတွေနဲ့ profile များကိုထုတ်လုပ်, ကျွန်တော်တို့လူမီနီယံအလွိုင်းတန်း, သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဤ 7000 စီးရီးလူမီနီယံအလွိုင်း၏အပူကုသမှုကဲ့သို့သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ပြောပြ ကျေးဇူးပြု. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီထုံးစံလူမီနီယံအလွိုင်းဖြစ်စဉ်ကိုပေးနိုင်ပါသည် ဖောက်သည်တောင်းဆိုချက်များနှင့်အညီဖြေရှင်းချက်။
ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများတွင်အသုံးပြုသောလူမီနီယံနှင့်လူမီနီယံအလွိုင်းတန်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, ကိုးကားကျေးဇူးပြုပြီး click here: လူမီနီယမ်အဆင့်
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းချင်းနှင့်အတူချောမွေ့စွာသွယ်တန်းထားသောပိုက်အောင်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမီနီယမ် Extrusion စာနယ်ဇင်း:
ပစ္စည်းကရိယာ ကုန်ပစ္စည်း ပြင်အချင်း အတွင်းစိတ်အချင်း
100MN ကို double-action ကိုတိုက်ရိုက် extrusion စာနယ်ဇင်း လူမီနီယံအလွိုင်းချောမွေ့စွာပိုက် 225-507mm 195-435mm
55MN ကို double-action ကိုသွယ်ဝိုက် extrusion စာနယ်ဇင်း လူမီနီယံအလွိုင်းချောမွေ့စွာပိုက် 70-265mm 50-254mm
28MN ကို double-action ကိုသွယ်ဝိုက် extrusion စာနယ်ဇင်း လူမီနီယံအလွိုင်းချောမွေ့စွာပိုက် 70-137mm 35-125
1880UST ကို double-action ကိုတိုက်ရိုက် extrusion စာနယ်ဇင်း လူမီနီယံအလွိုင်းချောမွေ့စွာပိုက် 28-88mm 14-78mm
1100UST ကို double-action ကိုတိုက်ရိုက် extrusion စာနယ်ဇင်း လူမီနီယံအလွိုင်းချောမွေ့စွာပိုက် 25-64mm 3-55mm
7050 လူမီနီယမ်အလွိုင်းပိုက် 7050 လူမီနီယံအလွိုင်းထိုကဲ့သို့သောထူလူမီနီယံအလွိုင်းပြား, extrusion အစိတ်အပိုင်းများ, ထုံးစံ shaped Forge နဲ့သေဆုံး Forge အဖြစ်လေယာဉ်တင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကိုအောင်အဘို့ဖြစ်၏။ လူမီနီယံအလွိုင်း၏ဤမျိုး, စိတ်ဖိစီးမှုချေးကွဲအက်ခြင်း, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခုခံအဖြစ်အဆင့်မြင့်ကျိုးခိုင်မာခြင်းမှခုခံချေးဖို့မြင့်မားသောခုခံရှိပါတယ်။
7A04 လူမီနီယမ်အလွိုင်းပိုက် 7A04 လူမီနီယံအလွိုင်းလေယာဉ်တင်အရေပြား, screw နှစ်ခုနှင့်စသည်တို့ကိုရောင်ခြည် girder, ဘောင်, တောင်ပံနံရိုး, ဂီယာ alighting ကဲ့သို့လေးလံသောဝန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကိုအောင်ဘို့ဖြစ်၏
အောက်ပါအတိုင်း Guoxin 7000 စီးရီးလူမီနီယမ်အလွိုင်းသွယ်တန်းထားသောပိုက်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်
ယခင်: 7055-T6 လူမီနီယမ်အလွိုင်း
နောက်တစ်ခု: 2A70-H112 လူမီနီယမ်အလွိုင်း
120 ဒီဂရီလူမီနီယမ် Extrusion angle
135 ဒီဂရီ Angle လူမီနီယမ်
3030 က Round Angle လူမီနီယမ်
အားလုံး SIZE လူမီနီယမ် angle
လူမီနီယမ် Angle ဘား 25 X ကို 25
လူမီနီယမ် angle စျေး
လူမီနီယမ်တူညီသောအခွင့်အရေး Equal angle
လူမီနီယမ် Extrusion angle
လူမီနီယမ် Extrusions ညာဘက်ထောင့်
လူမီနီယမ်အလွိုင်း Angle 5083
လူမီနီယမ်အလွိုင်းဝါယာကြိုးပေါက်က Round angle
လူမီနီယမ် angle ဒီဇိုင်း
လူမီနီယမ် angle အရွယ်အစား
စက်မှု Winows သည်လူမီနီယမ် Extrusion
angle Fixed လူမီနီယမ်
လူမီနီယမ် H ကို Beam ကို
လူမီနီယမ်ကိုယ့် Beam ကို
angle လူမီနီယမ် Extrusion စိတ်တိုင်းကျအသေးစိတ်
angle လူမီနီယမ်ပုံဖော် Extrusion
Anodized လူမီနီယမ် angle
ရောင်းရန် Anodized လူမီနီယမ် angle တူညီသောအခွင့်အရေး Equal
Black ကလူမီနီယမ် Led Channel ကို
Curve လူမီနီယမ် Extrusion
Extrusion လူမီနီယမ် Angle
High Quality Anodized လူမီနီယမ် angle တူညီသောအခွင့်အရေး Equal
L ကို Shape Extruded လူမီနီယမ် ထောင့်
အဖြူရောင် Anodized လူမီနီယမ်